संगीत यस्तो नसा हो जो मर्ने बेलामा पनि छुट्दैन – सचिन – Esancharpati
सचिन रौनियार १२ वर्षपछि गायनमा फर्किएका छन् । उनी ‘ए मान्छे’ बोलको गीत मार्फत गायनमा फर्किएका हुन् । भिडियो सहित गीत उनले केही समय अगाडि राजधानीमा एक कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको थियो । गीत अहिले श्रोता तथा दर्शकले रुचाइरहेका छन् । गीतमा प्रकाश सापकोटाको शब्द तथा जितेन लेप्चाको संगीत छ । २०४३ सालमा पहिलो एल्बम ‘सर्च’ बजारमा ल्याएका सचिनले १२ एल्बम बजारमा ल्याइसकेका छन्। उनले गाएका ‘छ भनौ कि छैन भनौ’, ‘यो वनमा छैन क्यारे न्याउली कराउदिन ए कान्छी’, ‘ए माया कहाँ छौ कहाँ’, ‘झन् झन् बढ्यो याद तिम्रो’, ‘आफ्नो मान्छे’लगायतका श्रोताले रुचाइएका गीत हुन् । यी नै गायकको किन गायनमा १२ बर्ष ग्याप रह्यो त्यस बिषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
१२ बर्षपछि गायनमा फर्किनु भएको छ । बिचमा किन हराउनु भयो ?
– हो । मैले १२ बर्ष पछि फेरि गीत ल्याएको हो । यो बिचमा काम गीत संगति गाउँने, रियाज गर्न लगायतका क्रियाकलाप भने छोडेको थिइन । गीत पनि रेकर्ड भएको थियो । १६,१७ गीत रेकर्ड गरेको छु । मिडियामा छाउने गरि १२ बर्षपछि आएको हो । गीत संगीतमा भने लगातार छु
लामो समयपछि आउदा फकर के पाउनु भयो ?
– धेरै फरक पाएको छु । अहिले गीत संगीत एनोलगबाट डिजिटलमा गएको छ । त्यो समयमा हुने गीत संगति र अहिलेमा आकाश जमिन फरक छ । अर्काे सोशल मिडिया नै भास्ट भयो । हामीले प्रमाणीत गर्न गाहे छ । अहिलेको संगीत पुरानो धार र नयाँ धारको बिच अगाडि बढी रहेको छ । दुई धारको बिचमा मैले काम गर्ने कोसिस गरिहरेको छु ।
चुनौती कति छन् ?
– गीत बन्नका लागि शब्द, संगीत र गायनको उत्कृष्टताको खाचो हुन्छ । त्यो आफ्नो कन्टेन्टमा पुगेको छ भने कुनै चुनौती लाग्दैन । गीतको प्याटन फरक हुन सक्छन् । मैले नयाँ जनेरेसन र पुरानो जेनेरेसको इन्टेस भनेर गीत गरिन । अहिले एक रातमा सेलिब्रेटी बन्ने चलनमा पनि गीत आउँछन् । यो बर्षमा म पर्दिन । म जहिले पनि सुन्न मिल्ने गीतको गायकको बर्षमा पर्दछु । मैले प्रतिसपस्र्धा अहिले क्वालिटीमा गरेको छु । परिमाणमा होइन ।
कस्तो गीत संगीमा रुचि रहदै आएको छ ?
–मनछुने संगीत, त्यस्तै शब्दमा मेरो रुचि रहदै आएको छ । मैले पहिले देखिनै पप र लोकलाई मिक्स गरेर निश्कने फ्युजन खालको गीत दिने कोसिस गरेको छु ।
गीतको लगानी बालुवामा पानी हो, हैनर ?
– आफ्नो रुचिको बिषयमा लगानी गर्नुपर्छ । मेरो रुचिको बिषय गीत संगीत हो । म कहिलै पनि रुचिको बिषय पैसामा तौलिन । मैले संगीमा लगानी आत्मसन्टुष्टिका लागि गरेको हो ।
अहिले भिडियो अनिबार्य छ ?
१२ बर्ष अगाडि गीत ओठले गुनगुनाउथ्यो । अहिले जिउ चल्ने भएको छ । अहिले नाचेर बुझाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
फेरि सचिन हराउने त होइन ?
नेपाल आजसम्म कलाकार भएर बाच्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । यो सबैलाई थाहा छ । गीत संगतिमा लागेर कमाउने भन्दा पनि गुमाउने मात्र हो । जोसँग छ । त्यसले जहिले पनि लाग्दा भइहाल्छ नि । कमाएर जिविको पार्जन गर्नेले भने अन्य काम पनि गर्नु पर्छ । यो बाच्नकै लागि गर्नुपर्छ । हाम्रा केही अग्रजको अवस्थाले पनि संगीतको अलवा बाच्नका लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । बाच्नका लागि अन्य केही काम गर्दा त संगीतमा ग्ग्याप भइहाल्छ नि । संगीत यस्तो नसा हो जो मर्ने बेलामा पनि छुट्दैन ।
गायनको अलवा रुचिको बिषय ?
–साहित्य र खेलकुदमा रुचि रहँदै आएको छ ।
अब निरन्तरता रहन्छ कि रहदैन ?
–अब न रोकिने अवस्थामा छैन । मैले अब निरन्तारता दिनका लागि आफ्नो ब्यकअप तयार गरेको छ ।